10 विश्वभरि उत्तम फूड मार्केटहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 विश्वभरि उत्तम फूड मार्केटहरू
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 31/01/2021)
तपाई विश्व भर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईं खाना मार्फत सबै ठाउँमा राम्रो अनुभव गर्नुहुनेछ. हाम्रो 10 विश्वभरि उत्तम खाद्य बजारहरूले तपाईंलाई यसको व्यक्तिहरूको बारेमा सबै गोप्य कुरा बताउँदछ, संस्कृति, इतिहास, र यसलाई कसरी मिश्रण गर्ने, पास्ताबाट प्रत्येक टोकेको साथ, तारा फल, र सॉसेज. साथै, यदि त्यो पर्याप्त छैन, तपाईं जहिले खाना स्टॉल सोध्न सक्नुहुन्छ’ आन्तरिक सल्लाहहरूको लागि मालिकहरू, युरोप देखि चीन सम्म.
1. कोर्स सलेया फूड मार्केट नाइसमा
नाइसमा सबैभन्दा ठूलो आउटडोर बजार पुरानो नाइसमा कोर्स साल्यामा रहेको खाना र फूलहरूको बजार हो. यहाँ तपाइँ ताजा पेस्ट्री पाउनुहुनेछ, पनीर, जडिबुटी स्मृति चिन्हको रूपमा फिर्ता ल्याउन, र स्थानीय व्यंजनहरु.
न केवल तपाईं फ्रान्सेली खानाको सबै भन्दा राम्रो मा संलग्न हुनेछ, तर तपाइँ यो सबै ताजा समुद्री हावामा अनुभव गर्नुहुनेछ. फूलहरू नजिकैको एको लागि सेटिंग्स पूरा खडा राम्रो पाक अनुभव.
राम्रो अद्भुत खाना बजार हरेक बिहान तपाइँको लागी प्रतिक्षा गर्नेछ, सोमबार बाहेक.
2. विश्वमा सर्वश्रेष्ठ फूड मार्केटहरू: लन्डनमा बरो बजार
लन्डन यसको अद्भुत सडक बजारका लागि परिचित छ, सुन्दर क्षेत्र, र सडक अद्वितीय कम्पनको साथ. केहि पनि लन्डनको खाद्य बजार मा विशेष र जीवन्त वातावरण संग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, र बरो फूड मार्केट उत्तम छ.
यहाँ तपाईले उत्तम सडक खाना पाउनुहुनेछ: काप्पाकासिन चीज टोस्टहरू, रोटी अगाडिको पेस्ट्रीहरू र केकहरू, श्रीमती. किंगको पोर्क पाईहरू, र लोभी बाख्राको मिठाईको लागि आइसक्रिम. यो अद्भुत बजारले आगन्तुकहरूलाई हरेक दिन स्वागत गर्दछ, अन्तिम को लागी 1,000 वर्ष, र लन्डनको शीर्ष स्थानहरू मध्ये एक हो.
3. विश्वमा सर्वश्रेष्ठ फूड मार्केटहरू: बेइजि Inमा स्यानयुन्ली बजार
विदेशी फल र दुर्लभ खाद्य पदार्थ, स्यानयुन्ली बेइजि’sको गोप्य रहस्य मध्ये एक हो. खाद्य बजार त्यो हो जहाँ स्थानीय शेफहरू र पश्चिमीहरू उनीहरूको स्टार फल र ताजा खाना किन्न आउँछन्, र जडिबुटीहरू आयात गरियो
त्यसैले, यदि तपाईंलाई भान्साकोठामा प्रयोग गर्न मनपर्‍यो भने, प्रेरित हुनु आवश्यक छ, यो स्थान हो. स्यानयुन्ली खाना बजार मा तपाइँ केहि पाउन सक्नुहुन्छ, थोक मूल्यमा, तर नगद मात्र भुक्तान गर्नुहोस्. स्यानयुन्ली खाना बजार चाओयाang जिल्ला मा छ र दैनिक खुला छ.
4. म्यूनिखमा सर्वश्रेष्ठ फूड मार्केट: को Viktualienmarkt
यदि तपाईं एक प्रारम्भिक चरा हो, त्यसो भए6के तपाइँलाई ताजा ब्रीभ कफी र प्रेट्जेल्स गन्धको साथ स्वागत छ. कर्णोलको पेस्ट्री स्ट्यान्ड बर्लिनको विक्टुअलिएनमार्केट फूड मार्केटमा खोल्ने पहिलो खाद्य स्टन्ड मध्ये एक हो.
यस म्यूनिखको विशेषताको अतिरिक्त, भिकुअलिएनमार्केटमा तपाईं उत्कृष्ट सेतो सॉसेज र अन्य बभेरियन भाँडा चाख्नुहुनेछ. Frauenstrasse र Heiliggeistkirche बीच वर्गमा, तपाईंले किसानको बजार र मुन्चेनर्स भेट्ने ठाउँ पाउनुहुनेछ.
5. चीनमा सर्वश्रेष्ठ फूड मार्केटहरू: ह Hongक Kongमा Kowloon सिटी गीला बजार
एक उल्लेखनीय संख्याको साथ 581 stalls, काउलुन फूड मार्केट ह Hongक Kongको सब भन्दा ठूलो बजार हो. तपाईंले यस अचम्मको बजारबाट दैनिक खुल्ला पाउनुहुनेछ6छु 8 बजे, र मात्र 14 लोक फू स्टेशन बाट पैदल बाट मिनेट. Kowloon बजार भ्रमण गर्न उत्तम समय रातको बत्ती हो जब, र खाना उत्सव सुरु हुन्छ.
Kowloon शहर गीला बजार सबै भन्दा राम्रो ताजा उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ, from seafood to vegetables. This market is so big, सबै कभर गर्नको लागि तपाईलाई पूरै दिन चाहिन्छ3कथाहरू, ह Hongक Kongको बिहानको खाजा र बेलुकाको खाजाको सुरुवात. यसमा थाई खाना चाख्नु समावेश छ किनकि यहाँ थाई जनसंख्या सबैभन्दा ठूलो छ.
काउलून बजारको लागि हाम्रो उत्तम सुझाव भनेको भीडलाई पछ्याउनु हो. यसरी, सब भन्दा लोकप्रिय स्टाल र स्टोरहरु ताजा उत्पादनहरु प्रदान गर्दछ, उच्च उत्पाद टर्नओभर को लागी धन्यवाद.
6. बोलोग्ना इटालीको Quadrilatero फूड मार्केट
बालसमिक तेलको आश्चर्यजनक सुगन्धको साथ, पास्ता को प्रकारहरु, र मोर्टेलेला, Quadrilatero खाद्य बजार निरपेक्ष पाक स्वर्ग हो. तपाईं सहमत हुनुहुन्छ इटालियन भोजन संसारमा सबै भन्दा राम्रो एक हो, र स्ट्रीट फूडले विश्वव्यापी रूपमा खाना चार्टहरू माथि दिन्छ.
यदि तपाईंसँग अझै कोठा छ भने, त्यसोभए रोमान्झोको शीत कटौतीको ट्याग्लियर इन्द्रियहरूका लागि एउटा भोज हुनेछ. तपाईं यो दिव्य खाना बजार नजिकै पाउनुहुनेछ पियाजा मग्गीओर, सोमबारबाट शनिबार खोल्नुहोस्.
7. KADEडब्ल्यूe बर्लिनमा फूड मार्केट
KadeWe खाद्य बजार हाम्रो मा एक सबै भन्दा विलासी खाद्य बजार हो 10 विश्व सूची मा सबै भन्दा राम्रो खाद्य बजार. यो जर्मन खाद्य बजार बर्लिनको शीर्ष डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू मध्ये एकमा अवस्थित छ र पूरै भुईँमा फैलिन्छ.
यसरी, यद्यपि यो फूड हल हो, तपाईंले KadeWe फूड मार्केटमा खाद्य पदार्थहरूको अनुपम चयन फेला पार्नुहुनेछ. उदाहरणका लागि, यदि तपाईं फेन्सी चीज, त्यसपछि 1300 तपाईंको चयनमा बिभिन्न चीज. वा, उत्कृष्ट डेसर्ट र परम्परागत वारस्ट, KadeWe खाद्य बजार को रूपमा, उत्तम र सबैभन्दा स्वादिष्ट खाद्य पदार्थहरूको लागि हो.
8. पेरिसमा बास्टिल फूड मार्केट
पेरिसको सबैभन्दा ठूलो खाद्य बजारमा भोजन भनेको प्रत्येक खाद्य प्रेमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा हो. विशाल बजार ठूलो क्रान्ति को नाम मा छ. त्यसोभए तपाईं आफ्नो आँखा र दिमागले चाख्नुहुनेछ जुन पेरिसले प्रस्ताव गरेको थियो.
हप्तामा दुई पटक तपाईंलाई खुला हतियार र फ्रेन्च ठाँउका साथ स्वागत छ. तपाईं स्थानीयहरूसँग मिल्नुहुनेछ र फ्रेन्च पेस्ट्रीहरूमा लिप्त हुनुहुनेछ, ताजा चीज, र शानदार सॉसेज. केवल बोउलेभर्ड रिचर्ड लेनोइरतिर लाग्नुहोस्, र तपाई खाना स्टोलहरूको अद्भुत संख्या देख्नुहुनेछ, सुगन्ध, र रंग.
9. भेनिसमा रियाल्टो फिश मार्केट
को किनारमा भव्य नहर, तपाईंले भेनिसको सब भन्दा पुरानो खाद्य बजार देख्नुहुनेछ, रियाल्टो माछा बजार. भेनिसको केन्द्रीय पुल पछि नामाकरण गरिएको, रियाल्टो माछा बजार वेनिसियनहरु संग समुद्री खाना र करीबी मिसाउने को एक अद्भुत विविधता प्रदान गर्दछ.
रियाल्टो बजार खुल्ला छ 8 खाजा सम्म, मंगलबारदेखि शनिवार. तपाईं फेला पार्नुहुनेछ Pescheria र एरबेरिया सँगसँगै, ताकि तपाईं खाजा को लागी केहि पनि पाउन सक्नुहुन्छ, ताजा तरकारीहरू बाट सीधा समुद्र बाट scallops.
10. रोममा टेस्टासिओ फूड मार्केट
आर्द्र इटालियन दिनहरू वा वर्षाको जाडो सप्ताहन्त, टेस्टासियो फूड मार्केट रोममा सब भन्दा राम्रो ह्याout्गआउट स्थान हो. यो अद्भुत खाना बजार एक रोमन पुरातात्विक साइट मा अवस्थित छ, त्यसोभए तपाईं पुरानो इतिहासको साथ ताजा पास्ताको थालमा भाँच्नुहुनेछ.
टेस्टासियो बजारलाई नुभोो मर्काटो भनिन्छ किनकि यो टेस्टासियो छिमेकीमा आफ्नो नयाँ स्थानमा सरेको छ 80 धेरै अगाडी. तथापि, तपाईं अझै पुरानो स्ट्रिट फूड बक्सहरू फेला पार्नुहुनेछ, बक्समा बाइट्स र भलिको स्यान्डविचहरू 90, बक्समा कासा मन्कोको ताजा पिज्जा 22, र अरु धेरै.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईंलाई ट्रेन द्वारा विश्वभर एक अविस्मरणीय पाक साहसिक योजना मद्दत गर्न खुशी हुनेछौं.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "विश्व भरका १० सर्वश्रेष्ठ फूड मार्केट" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-markets-world%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, र तपाईं zh-CN परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ / fr वा / de र अधिक भाषाहरूमा.